Gaadhi Ceerigaabo ku foolahaa oo qalibmay iyada oo ay dad ku dhinteen | maakhir.com
March 27, 2008 in Somalia
Ceerigaabo:- Gaadhi nooca xamuulka qaada ah ayaa ku dhacay wadada laamig ah ee Dureera, gaadhigaasi ayaa la sheegay inuu ku sii Foolahaa Magaalada Ceerigaabo ee Xarunta Gobolka Sanaag, waxana ku dhintay ilaa Hal Ruux halka tira kalena uu dhaawac culusi soo gaadhay, Gaadhigaasi ayaa la cadeeyay inuu si xawli ah u soconayay isla markaan uu aad u rarnaa.
Baabuurkaasi ayaa waxa uu shalay galabtii ka boqoolay Magaalada Bosaaso ee xarunta Gobolka Bari halkaasi uu rikaab iyo rarba u siday Magaalada Ceerigaabo,waxana la cadeeyay inuu ku dhacay Dalcada Dureera ee 25-Km u jirta Magaalada Bosaaso.
Wadihii gaadhigaasi oo lagu magcaabo Cumar Janbaaqo ayaa noo sheegay inuu gaadhigaasi ku nafwayay Hal Ruux halka ay in kalena dhaawacan yihiin, dareewalkaasi waxa uu sheegay inuu gaadhi aad u buuxay markii falkaasi dhacayay.
Hantiilaha Gaadhigan dhacay ayaa lagu magcaabaa Cabdi Muuse Madaxay walaw aanay nuu suura galin inaan waraysi la yeelano.
Wariyaayaal booqday Cisbitaalka dadkaasi masiimadu heshay la keenay ayaa soo tabinaya inay arkee ilaa 3- Ruux oo dhaawac culus ah kuwaasi oo mid ka mid ah ay Gu”day Logta midig, balse dhakhaatiirta ayaa heegankii ugu sareeyay la galiyay si ay dadkaasi Gar Gaar deg deg ah ugu fudiyaan.
Shilalka Baabuurta ayaa moodaa inay sii kordhiyaan iyada oo taasi sabab looga dhigayo dareewalada oo aan aqoon fiican u lahayn Baabuurta iyo waliba Xadi buux dhaafa oo gaadiidka qaarkii la saaro.
“Talo walaal diide tagoogaduu kajabaa”
« Ilaa 40- NGO oo Caalami ah ayaa ka dayriyay xaalada Somaliya
Xagee Marayaa Shirkii wadamada carabta ee ka socda Siriya »